राष्ट्रकविलाई मनिराम वाङ्मय पुरस्कार- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
राष्ट्रकविलाई मनिराम वाङ्मय पुरस्कार
धनगढी — राजधानी बाहिरको सबैभन्दा ठूलो साहित्यिक पुरस्कार राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलाई प्रदान गरिने भएको छ ।
धनगढीमा गतवर्ष महाकाव्यकार मनिराम जोशीका छोरा गोविन्दराजले स्थापना गरेको १ लाख राशिको मनिराम वाङ्मय पुरस्कार पहिलो पटक राष्ट्रकविलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको नेपाली साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठानले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा बताइयो ।
‘पहिलो वर्ष नै राष्ट्रकविलाई पुरस्कार प्रदान गर्न पाउँदा प्रतिष्ठान गौरवान्वित भएको छ,’ प्रतिष्ठान अध्यक्ष साहित्यकार पदमराज जोशीले भने, ‘प्रा.डा. रामचन्द्र भट्टको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रकविलाई उहाँको जन्मशताब्दीका अवसरमा उक्त पुरस्कृत गर्ने भएका हौं ।’
गतवर्ष प्रतिष्ठानको संयोजनमा धनगढीमा गोविन्दराजले १० लाखको अक्षयकोष स्थापना
गरी हरेक वर्ष १ लाखरुपैयाँको पुरस्कार दिने निर्णय गरिएको थियो ।
प्रकाशित : आश्विन २७, २०७४ ०९:३१
आश्विन २७, २०७४ हिमेश
फुटबलको विश्वकप छनोटमा त्यस्तो के छ, जुन विश्वकप आफैंमा छैन ? यो प्रश्न अर्जेन्टिना र लियोनल मेसीलाई सोधे हुन्छ । अथवा अर्जेन्टिनी समर्थकलाई । एक वर्षपछि रूसमा हुने विश्वकपको छनोट अहिले ‘क्लाइमेक्स’ मा पुगेको छ । अफ्रिकी समूह चरण र प्ले–अफलाई छाडेर छनोटका खेल समाप्त भइसकेका छन् । सन् २०१८ को विश्वकपमा कुन–कुन टिमले खेल्नेछ त, त्यसको समीकरण पनि लगभग तय भइसकेको छ ।
अर्बौं जनसंख्यालाई आकर्षित पार्ने विश्वकप फुटबल अर्को वर्ष रुसमा हुँदै छ । त्यसमा ३२ टिमबीच चर्को प्रतिस्पर्धा हुनेछ । यसको छनोट पनि उत्तिकै चर्को छ, जुन सुपरस्टार लियोनल मेसी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोको टिमले गरेको संघर्ष नियाले हुन्छ । आइसल्यान्ड र पानामाले इतिहास रच्दा रुसको यात्रा तय गर्ने २२ टिममा समृद्ध अमेरिका र सात वर्षअघि फाइनल खेलेको नेदरल्यान्ड्स परेनन् ।
धेरैलाई डर थियो, कतै यही समीकरणमा अर्जेन्टिना नपर्ने त होइन ? अर्जेन्टिनी टिममाथि नै यति धेरै चिन्ता किन त ? हाम्रोतिर त हद नै देखियो, अर्जेन्टिना समर्थकहरूको डर, चिन्ता, पछि खुसी र उमंग । उत्तर र कारण पनि स्पष्ट छ । र, यो हो, लियोनल मेसी । मेसी निर्विवाद रूपमा हाम्रा पुस्ताले देख्न पाएका सबैभन्दा राम्रा खेलाडी हुन्, यसमा कुनै शंका छैन । तर यही मेसी भएको टिमले छनोटमा भने लगातार संघर्ष गर्नुपर्‍यो ।
त्यसो त अर्जेन्टिनी टिममा अरू उत्तिकै राम्रा खेलाडी नभएको पनि होइन, तर एउटा टिमका रूपमा अर्जेन्टिनाको प्रदर्शन छनोटमा पक्कै राम्रो हुन सकेन । त्यसैले इक्वेडरविरुद्धको अन्तिम छनोट खेल अगाडि अर्जेन्टिना टिममाथि ठूलो दबाब थियो । मेसीमाथि त अझ धेरै दबाब । तर विश्व फुटबलको पनि एउटा अघोषित नियम जस्तै हो, मेसी जस्ता खेलाडीले आफ्नो वास्तविक रूप देखाउने भनेको अन्त्यतिर नै हो, जति बेला टिमलाई साँच्चै अब्बल दर्जाको खेल आवश्यक हुन्छ ।
इक्वेडरको क्युटोमा खेल्न सजिलो हुन्न किनभने यो समुद्री सतहबाट २८ सय मिटर उचाइमा पर्दछ । खेल्दा मात्र कहाँ हो र ? यहाँ पुग्दा पनि सास फेर्न गाह्रो मान्ने धेरै छन् । ब्राजिली टिमको एउटा तस्बिर निकै भाइरल भएको थियो, यही क्युटोमा खेल्दाको । त्यस तस्बिरमा देखिन्छ, ड्ेरसिङ रुममा केही खेलाडी सीधै सिलिन्डरबाट अक्सिजन लिइरहेका छन् । फेरि इतिहास पल्टाउने हो भने क्युटोमा अर्जेन्टिनाको पछिल्ला केही प्रदर्शन राम्रा पनि थिएनन् ।
सायद मेसीलाई यस्तै गाह्रो र अप्ठ्यारो स्थिति मनपर्दो हो । इक्वेडरविरुद्ध एक गोलले पछाडि परेको स्थितिमा पनि मेसीले निकै उत्कृष्ट ह्याट्रिक गरे । यी तीन गोल फेरि दोहोर्‍याएर हेर्नुपर्छ, सबै एकसेएक छन् । एउटा हेरेपछि त्यही उत्कृष्ट जस्तो लाग्छ, फेरि अर्को हेर्दा त्यो झन् उत्तिकै उत्कृष्ट । मेसीको विशेषता नै यही हो । जुन दिन अर्जेन्टिना पनि रूसमा जाने तय भएको थियो, त्यही दिन पोर्चुगलले पनि त्यहाँ जाने टिकट काट्यो ।
पोर्चुगल अर्थात् क्रिस्टियानो रोनाल्डोको टिम । डर थियो, कतै यही युरोपेली च्याम्पियन पनि विश्वकपका लागि छनोट नहुने त होइन ? आखिरमा पोर्चुगल पनि आफ्नो समूहको छनोटमा शीर्ष स्थानमा रहेपछि प्ले–अफ पनि खेल्नुपरेन । छनोटका क्रममा मेसीको जति चर्चा भयो, सायद त्यति यसपल्ट रोनाल्डोको भएन । छनोटका क्रममा रोनाल्डोले पोर्चुगलका लागि त्यस्तो भूमिका खेल्न सकेनन्, जुन मेसीले अर्जेन्टिनाका लागि खेले, त्यसैले पो हो कि ?
अहिलेको आधुनिक फुटबलमा ‘मेसी भर्सेस रोनाल्डो’ को चर्चा कहिले पनि सेलाउने छैन । दुवै खेलाडीका उत्तिकै समर्थक छन् र यी समर्थकले मेसी अथवा रोनाल्डोको समर्थन गर्नु पछाडिका पनि उत्तिकै कारण होलान् । तर यसपल्टको छनोटका क्रममा मेसीले सिद्ध गरेका छन्, उनी वास्तवमै अद्भुत खेलाडी हुन् । उनी जत्तिको खेलाडी विरलै हेर्न पाइन्छ । मेसी मन पर्नु पछाडि उनको भलाद्मीपनले पनि उत्तिकै भूमिका खेल्छ अनि रोनाल्डो कम मन पर्नु पछाडि उनको केही घमण्डी पाराको कारण ।
विश्व फुटबलमा यस्तै चर्चा अति व्यापक हुन्छ र यसको उत्तरमा रोनाल्डो भन्ने गर्छन्, ‘धेरै मान्छे, मेरो प्रगति र उन्नति देखेर ईष्र्या गर्छन् ।’ केही हदसम्म होला पनि । यो चर्चा कहिल्यै सेलाउने पनि छैन, जसरी पेले राम्रो कि म्याराडोना राम्रो भन्ने विवाद ।
मेसी र रोनाल्डो दुवैले फेरि एकपल्ट के थाहा पाए भने विश्वकपको छनोट वास्तवमै निकै कठिन हुने गर्छ । त्यसैले कुन टिमले कसरी खेल्दा विश्वकपको अन्तिम चरणका लागि छनोट हुन्छ, त्यसको उत्तर पाइन्न । जसरी कुन फिल्म कुन कथा समातेर बनायो भने हिट हुन्छ, त्यसको उत्तर अहिलेसम्म कसैले दिन सकेका छैनन् । यसपल्टको विश्वकप छनोटले फेरि सिद्ध गरेको छ, छनोट यात्रा वास्तवमै पेचिलो छ ।
दक्षिण अमेरिकाबाटै चिली पनि त छनोट हुन सकेन जबकि यही टिमले लगातार दुईपल्ट कोपा अमेरिका जितिसकेको छ, त्यो पनि दुवैपल्ट उपाधि भिडन्तमा अर्जेन्टिनालाई हराएर । सँगै उत्तर
अमेरिकी क्षेत्रबाट अमेरिका पनि छनोट हुन सकेन । फुटबल बजारका लागि अमेरिका छनोट हुनु राम्रो हुन्थ्यो । छनोटको अन्तिम खेल अगाडिसम्म अमेरिकाले एक पाइला रूस जाने बाटोमा अगाडि सारिसकेको थियो । तर ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोसँगको खेल गुमाएपछि अमेरिका दुई पाइला पछाडि हट्न पनि बाध्य रह्यो । यही मज्जा हो, विश्वकप छनोटको ।
अमेरिकाको हारले पानामा भने पहिलोपल्ट विश्वकपमा छनोट भयो । जनसंख्याको आधारमा न ट्रिनिडाड ठूलो हो, न त पानामा नै । झन् युरोपमा आइसल्यान्डको के कुरा, यसको जनसंख्या तीन लाखभन्दा केही बढी मात्र । तर यही आइसल्यान्डले विश्व फुटबललाई चकित पारेर छनोट यात्रा सफलतापूर्वक पार गर्‍यो । यस्तै उपलब्धि नेदरल्यान्ड्सले पाउन सकेन । युरोपेली फुटबलको महाशक्ति हो, डच टिम । तर छनोटमा फेल हुनेमा एक पर्‍यो, यही टिम ।
इटालीले पनि सन् २०१८ जुन–जुलाईमा रूसमा खेल्ने हो अथवा होइन, तय भइसकेको छैन । इटाली पनि त फुटबलको महाशक्ति हो, ब्राजिल र जर्मनी जत्तिकै । बरु सायद ब्राजिल र जर्मनीजस्ता टिमसँग केही अचूक फर्मूला छ, छनोट कसरी खेल्नुपर्छ भनेर । उनीहरूको प्रदर्शन हेर्दा लाग्छ, छनोट खेल्न यिनीहरूबाट पो सिक्नुपर्छ । यही मज्जा हो, विश्वकप छनोटको । अनि क्वालिफिकेसन क्लाइमेक्सको ।
हिमालमुनि साहित्य र संस्कृति मन्थन
‘ओ नायक’ लिएर सुनिता
थारु साहित्य मेला
भेटिएन मौलिक परिकार
‘गोविन्द वियोगी पत्रकारिता पुरस्कार’ देवकोटालाई
घुम्टो उघार्दै मिथिला कला